Ungahlola Kanjani Uhlu Lweziqondisi Zakho Zendawo | Martech Zone
Ungahlola Kanjani Uhlu Lweziqondisi Zendawo Yakho
NgoLwesihlanu, Okthoba 23, 2020 NgoLwesine, ngo-Okthoba 22, 2020 Douglas Karr
Izinkomba zasendaweni zingaba isibusiso nesiqalekiso emabhizinisini. Kunezizathu ezintathu ezibalulekile zokunaka izinkomba zasendaweni:
Ukubonakala Kwemephu ye-SERP - izinkampani azivami ukubona ukuthi ukuba nebhizinisi newebhusayithi akusho ukuthi kukwenze ubonakale emakhasini omphumela wezinjini zokusesha. Ibhizinisi lakho kumele libhalwe ohlwini Ibhizinisi le-Google ukuthola ukubonakala esigabeni semephu sekhasi lomphumela wenjini yokusesha (SERP).
Amazinga we-Organic - Izinkomba eziningi zinhle ukuthi zingabhalwa ohlwini ukuze wakhe amazinga we-organic jikelele wesayithi lakho nokubonakala (ngaphandle kweMephu).
Ukudluliswa Kwezikhombisi - abathengi namabhizinisi basebenzisa izinkomba ukuthola izindawo zokuthengisa, izindawo zokudlela, abahlinzeka ngezinsizakalo, njll. Ukuze uthole ibhizinisi ngokufakwa kuhlu.
Izinkomba Zasendaweni Azihle Njalo
Ngenkathi kunezinzuzo kwizikhombisi zasendaweni, akuhlali kuyisu elihle ngaso sonke isikhathi. Nazi ezinye izinkinga ngezikhombisi zasendaweni:
Ukuthengisa Okunolaka - Izinkomba zasendaweni zivame ukwenza imali yazo ngokukutholela kuhlu lwama-premium, izikhangiso, izinsizakalo, nezenyuso. Kaningi kunalokho, lezi zinkontileka zihlala isikhathi eside futhi azinawo amamethrikhi wokusebenza ahlobene. Ngakho-ke, yize kuzwakala kuwumqondo omuhle ukuthi ubhalwe ngaphezu kontanga yakho… uma kungekho noyedwa ovakashela umkhombandlela wabo, ngeke kusize ibhizinisi lakho.
Izincwajana Qhudelana NAWE - Izinkomba zasendaweni zinamabhajethi amakhulu futhi empeleni zincintisana nawe ngokomzimba. Isibonelo, uma ungumuntu ophahleni lwendawo, umkhombandlela wohlu lwasendaweni lwabazophahla uzosebenza kanzima ukukala ngaphezu kwewebhusayithi yakho. Ukungasho ukuthi bazokwethula yonke imincintiswano yakho eceleni kwakho.
Eminye imikhombandlela Izokulimaza - Ezinye izinkomba zigcwele izigidi zokungenayo kogaxekile, i-malware, namawebhusayithi angafanelekile. Uma ngabe isizinda sakho sixhunywe kulawo makhasi, empeleni kungalimaza amazinga akho ngokukuhlanganisa nalawo masayithi.
Izinsizakalo Zokuphathwa Kweziqondisi Zendawo
Njengazo zonke izinkinga zokumaketha laphaya, kunepulatifomu yokusiza abaninimabhizinisi noma ama-ejensi wokumaketha ukuphatha izinhlu zabo. Ngokwami, ngincoma ukuthi izinkampani ziphathe i-akhawunti yazo ye-Google Bhizinisi ngqo ngohlelo lokusebenza leselula le-Google Business - kuyindlela enhle yokwabelana nokubuyekeza okunikezwayo kwakho kwasendaweni, wabelane ngezithombe, futhi uhlale uthintana nezivakashi ze-SERP.
I-Semrush iyipulatifomu engiyithandayo yokucwaninga nokuqapha ukubonakala kwezinjini zokusesha zamakhasimende ami. Manje sebekhulise iminikelo yabo ekufakweni kuhlu kwasendaweni nge- new uhlu lokuphatha ithuluzi!
Hlola Ukubonakala Kohlu Lwasendaweni
Into yokuqala ongayenza ukuhlola izinhlu zakho. Faka izwe, igama lebhizinisi, ikheli lomgwaqo, ikhodi ye-zip, nenombolo yocingo yebhizinisi lakho:
I-Semrush ikunikeza ngokuzenzakalela uhlu lwezikhombisi-ndlela ezigunyazwe kakhulu nokuthi uhlu lwakho luvezwa kahle kanjani. Imiphumela idiliza imiphumela nge:
Present - ukhona kumkhombandlela wohlu lwendawo futhi ikheli lakho nenombolo yakho yocingo kunembile.
Ngezinkinga - ukhona kumkhombandlela wohlu lwendawo kepha kunenkinga ngekheli noma inombolo yocingo.
Akwethuli - awukho kulezi zikhombisi-ndlela ezigunyaziwe zendawo.
Ayitholakali - umkhombandlela okukhulunywa ngawo awukwazanga ukufinyelelwa.
Uma uchofoza Sabalalisa Ulwazi, ungakhokha imali yenyanga, futhi Semrush izobe isibhalisa ukungena kokufakwa ohlwini okungaveli kuyo, ivuselele okufakwayo ekwenzayo lapho kungekho khona okukhona, bese iqhubeka nokugcina izinkomba zivuselelwa njalo ngenyanga.
Izici ezingeziwe ze- Semrush Uhlu Lwasendaweni
I-Google Map Heatmap - Bona kahle ukuthi uvela kahle kangakanani kwimiphumela ye-Google Map ezindaweni ezizungeze ibhizinisi lakho ngqo. Ngokuhamba kwesikhathi, ungalandelela ukuthi uthuthuke kahle kangakanani.
Ukusebenziseka Kokusesha Ngezwi - Abantu basesha ngezwi labo manje kunanini ngaphambili. Semrush iqinisekisa ukuthi ukufakwa kwakho kuhlu kulungiselelwe imibuzo yezwi.
Landelela bese uphendula kuzibuyekezo - Bona konke ukubuyekezwa kwebhizinisi lakho bese uthatha izinyathelo ezifika ngesikhathi ukugcina isithunzi sakho sebhizinisi ngokuphendula ku-Facebook naku-Google Business.
Phatha iziphakamiso zomsebenzisi - Bona izinguquko kuhlu lwakho eziphakanyiswe abasebenzisi bese uzivuma noma uzenqabe.
Thola futhi Ususe Amabhizinisi Amanga - Kungaba khona abakhohlisi abanegama lebhizinisi elifanayo nawe kuwebhu. Lungisa noma yiziphi izinkinga ezihlobene!
Bheka Ukufakwa Kuhlu Kwakho Kwasendaweni
Ukudalulwa: Siyinhlangano ephethwe yi Izinhlu Zendawo zeSemrush
Tags: izinkomba zebhizinisihlola umkhombandlela wendawohlola ukufakwa kuhlu kwasendaweniizinkomba zasendaweniukusesha kwendawoamazinga okusesha wendawoseo sendawo
Ukumaketha kweKhoros: Ukumakethwa Kwemidiya Yezenhlalo nokuphathwa Kwebhizinisi